वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु - Sankalpa Khabar
4. महन्थ, राजेन्द्र र लक्ष्मणलाल कर्णलाई कारबाही गर्ने जसपाको तयारी
5. जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई
6. कांग्रेसमा साढे चार लाख नयाँ सदस्य थपिए, समितिले बुझायो प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु
६ श्रावण १२:५०
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालय क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
यसरी ज्यान गुमाउनेहरुमा निकुञ्ज क्षेत्रका ११ जना छन् भने डिभिजन वन कार्यालयको चितवन र नवलपरासी क्षेत्रका तीनजना छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी बाघ र गैँडाको आक्रमणबाट पाँच/पाँचजना छन्।
हात्तीको आक्रमणबाट दुई, बँदेलको आक्रमणबाट एक र गौरी गाईको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही अवधिमा निकुञ्ज र वन कार्यालय क्षेत्रमा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट ४३ जना घाइते भएका थिए ।
घाइतेमध्ये २५ सामान्य र १८ जना सख्त घाइते भएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निकुञ्जमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये डिभिजन वन क्षेत्रमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही अवधिमा ३१ घाइते भएका थिए । घाँस दाउरा काट्न, निगुरो टिप्न, गाईबस्तु चराउन जाने क्रममा निकुञ्ज र डिभिजन वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमणसँगै निषेधाज्ञाको समयमा मानिस फुर्सदिला भएर जङ्गल प्रवेश गर्ने गरेकाले पनि वन्यजन्तुको आक्रमण बढेको हो ।
निकुन्जले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइतेको परिवारलाई राहतस्वरुप रु एक करोड ७४ लाख, ८४ हजार ९२२ वितरण गरेको छ । यो रकम मृतकका परिवारलाई रु १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्चस्वरुप अवस्था हेरी रु २० हजारदेखि दुई लाखसम्म वितरण गरिएको थियो । यस्तै घरगोठ, पशुधन, अन्नबाली, बाली भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिबापत पनि राहत वितरण गरिएको थियो ।
आगलागीबाट घर जलेर नष्ट, ४४ लाखभन्दा बढीको क्षति
६ श्रावण १०:१७
नेपालमा झन्डै सात लाखले लगाए पूर्ण खोप, उनीहरूले मास्क…
१० श्रावण १२:०५
किसानकाे पिडाः लालपुर्जा हातमा, जग्गा खोलामा !
१० श्रावण ०७:३३
विपदले निम्त्याएको दुःख, कहाँ कति क्षति ?
१० श्रावण १४:३६
ललितपुर कांग्रेस सचिव घिमिरेको निधन, प्रधानमन्त्री देउवा स्तब्ध
११ श्रावण १४:१०
होटल व्यवसायीका दुःख: न खोप, न खोल्ने अनुमति
१२ श्रावण १२:३२
१२ श्रावण ०७:१८
कोरोनाको खोपः जसको शक्ति, उसकै भक्ति
७ श्रावण ०६:५५
८ श्रावण १६:०४
राष्ट्रियसभामा मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
८ श्रावण १७:०९
१२ श्रावण १५:४९